नेकपामा परिवारवाद : बाबु प्रदेश प्रमुख, छोरो रजिष्ट्रार ! | ehimalayan news portal
नेकपामा परिवारवाद : बाबु प्रदेश प्रमुख, छोरो रजिष्ट्रार !
Breaking News, देश, नेपाल, मुख्य खबर, शिक्षा, समाज
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ भाद्र बुधबार
१७ : ३०
१७ भदौ, बिराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका नेकपा नेताका बाबुछोराले सरकारी नियुक्ति पाएका छन् । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित बुबा विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई वागमती प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको सरकारले उनका छोरा राजेशलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाको रजिष्टारमा नियुक्त गरेको छ ।
विष्णुप्रसाद तत्कालीन एमालेका पुराना नेता हुन । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका विमल आचार्यसँग पराजित भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा कांग्रेसका आचार्यले २० हजार ७७६ मत ल्याएका थिए । तत्कालीन एमालेका उम्मेद्वार प्रसाईंले १९ हजार ४२२ मत ल्याएका थिए ।
नगरपालिकाको चुनावमा पराजित भएका प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १९ कात्तिक २०७६ मा बाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रमुखका रुपमा सपथ-ग्रहण गराएको थियो ।
उनै प्रदेश प्रमुखका छोरा राजेश प्रसाईलाई प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बाबुकै उपस्थितिमा केही दिनअघि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाको रजिष्टारमा नियुक्त गरेका छन् ।
मदन भण्डारीका नाममा यो प्रतिष्ठान वागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको हो । र, बाबु जुन प्रदेशको प्रमुख छन्, त्यहीँ छोरालाई प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बनाइएको हो ।
को हुन् राजेश प्रसाई ?
विष्णुप्रसाद प्रसाईका छोरा राजेशसँग अस्पताल म्यानेजमेन्टको अनुभव छ । उनले यसअघि विराटनगरको विराट आँखा अस्पताल, सञ्जिवनी अस्पताल, काकडभिट्टा आँखा अस्पताल, विराटनगरको आरके चिल्डेन अस्पताल र आरके सिटी सेञ्टरमा व्यावस्थापकको भूमिका निर्हबाह गरेका थिए । विराट, सञ्जिवनी र काकड्भिट्टा अस्पतालमा उनको लगानीसमेत छ ।
केही वर्षअघि गोल्छा आँखा अस्पताल बिराटनगरबाट म्यानेजमेन्टको काम सुरु गरेका प्रसाईको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको तयारी थियो । तर, वीपीमा सम्भव नभएपछि उनी वागमती प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा गठन गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाको रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका हुन् ।
Newer PostProhibitory order in Kathmandu Valley extended for one more week
Older Postनेपालमा एकैदिन थपिए ११२० कोरोना संक्रमित, ११ सय १२ जना डिस्चार्ज